Exercises kutetepa makumbo - Matanho, matipi uye zvimwe | Bezzia
Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi akanyanya kurovedza muviri kuti uderedze huremu makumbo? Nhasi iwe uchaona nekuti ndeimwe yesarudzo idzo dzakawanda uye zhinji dzinoda. Hazvisi nyore nguva dzose kudzikisa iyo chaiyo nzvimbo yemuviri wedu uye nekuda kwechikonzero ichocho, isu tinowanzo kukasira kupererwa.
Naizvozvo, zvakanakisa kugadzira mubatanidzwa wezvakakosha kurovedza muviri, zvimwe zvakasarudzika uye izvi zvese zvinotenderedza nekudya kwakanaka uko kune. Ipapo chete ndipo patinogona kuzadzisa zvese zvatakaronga kuti tiite. Ehe, iwe unofanirwa kuve nemoyo murefu uye kusimbirira. Tinotanga kurwira chinangwa chedu here?
1 Maitiro Ekutsva Gumbo Fat nekukurumidza
2 Chii chekumira kudya kutetepa makumbo
3 Exercises kutetepa makumbo nezvidya
3.3 Nhanho kumusoro uye pasi
4 Exercises kutetepa makumbo uye kubvisa cellulite
5 Tricks uye kurovedza muviri kuti mutete zvidya zvako
Maitiro Ekutsva Gumbo Fat nekukurumidza
Kunyangwe isu tichida kudaro, isu takatotaura kuti hatigone kurasikirwa nemafuta chero munzvimbo yemuviri nekukurumidza. Asi ichokwadi kuti tinogona kuwana imwe nzira ipfupi zvishoma. Chekutanga pane izvi kufunga nezvekudya zvine hutano kana mararamiro. Hatifanirwe kufa nenzara Kwete zvakati wandei, asi isu tinodzora koriori yedu yekudya, tinosarudza mimwe miriwo uye mapuroteni, chengeta makabhohaidhiretsi asi tora chikafu chakakangwa uye makeke kubva muhupenyu hwedu kwechinguva.
Kune rimwe divi, kune chikamu chekurovedza muviri icho chinopedzwa nechikafu. Mune ino kesi, iwe unogona kutanga nekusvetukira mukati kuita madhiri akadai seyemwoyo zviitiko. Zviri? Zvakanaka, enda unofamba nhanho ine mwero, dzidzira kuchovha bhasikoro kana kutenderera uyezve, kukwira kana kudzika masitepisi zvakare kuverengera sekudaro. Izvo zvese zviitiko zvinomhanyiswa nemoyo kubva ingangoita miniti yekutanga, izvo zvinopa mhedzisiro zvirinani kana zvasvika pakuonekana nemafuta. Zvese zvisati zvaitika, panguva uye shure, yeuka kunwa mvura yakawanda kana tii yemakwenzi uye wosiya zvinwiwa zvine shuga. Matanho ako ekutanga kuzadzisa chinangwa chaunoda atotorwa kare!
Chii chekumira kudya kutetepa makumbo
Uyu mubvunzo wakadzokororwa kana uchitaura nezvekudzora huremu mumakumbo kana dzimwe nzvimbo dzemuviri. Asi chokwadi ndechekuti isu tinofanirwa kudya, asi hutano uye hwakasiyana. Ichokwadi kuti kamwe chete pasvondo tinokwanisa kuzvigutsa, asi kana tikachengeta mararamiro anoenderana nekudya zvine utano, tichazadzisa chinangwa nekukurumidza kupfuura zvatinotarisira.
Tinofanira kutaura kuonekana, kana kuonekana, kune zvese zvakatogadzirwa chikafu, chakakangwa kana kumakeke.
Saizvozvo, zvakare kune zvine shuga zvine kabhoni kana majusi akapakurwa.
Tichanwa mamwe infusions kana kofi asi nemukaka wakaomeswa, pamwe neyogati zvakare isina shuga.
Kana zviri zvekudya, ichokwadi kuti akati wandei pavhiki unogona kuwana chero chaunoda. Asi iyo yakawanda yenguva yacho tinofanira kutarisa nyama chena dzakadai sehuku kana turkey.
Hove, tuna uye zvimwe zvegungwa zvichavewo chikamu chekudya kwedu kutsva.
Ehezve, iwo ese mapuroteni anofanirwa kusanganiswa nemiriwo. Muchokwadi, izvi zvichavhara hafu yeplate yako. Yeimwe hafu, chimwe chikamu chichava cheprotein uye chimwe chemakabohydrate senge chingwa chegorosi chakazara kana pasita.
Inosanganisira michero yekunwa nguva uye nemupiro wemavitamini waunoda zvakare.
Exercises kutetepa makumbo nezvidya
Ndeupi mutambo wakanakisa wekutetepa makumbo ako? Uyu mubvunzo unogara uchititambudza uye kuti ikozvino, isu tine mhinduro. Asi haisi imwe chete, asi isu tichawana akati wandei uye ese anoshanda chaizvo, saka, tichavaedza mumuviri wedu.
Usati watanga kana paine kurovedzera muviriIzvo zvinogara zvichikurudzirwa kudziya pamberi kuti udzivise kukuvara kunotevera. Izvo zvakati, kana zvasvika pakupindura mubvunzo weakanakisa kurovedza kune makumbo madiki, isu takasara ne squats mune yekutanga chinzvimbo. Tine shanduro dzinoverengeka, hune kana husina huremu, ine bhawa, sumo, isometric, nezvimwe. Asi zvinofanirwa kutaurwa kuti vese vanozove vakapfuura kukwana kugadzirisa izvo zvinotisvitsa pano nhasi. Zvakare, iwe unogona kugadzira maitiro ane akatiwandei marudzi kuti ako rovedzo inakidze. Rangarira kuzorora kwemasekondi makumi maviri pakati peye yega rep rep.
Mune ino kesi, matanho acho achatibatsira kudzikisa huremu asiwo kutaura gumbo rese. Saka zvakare inofanira kuve iripo pane edu ezuva nezuva maitiro. Iwe unomira, uine kupatsanurwa kudiki pakati pavo uye unotora nhanho uchidzoka nerimwe remakumbo ako, nepo rimwe rinosara rakachinjika. Asi rangarira kuti ibvi harifanire kupfuudza chikamu chetsoka nekuti ipapo tinogona kuve nerudzi rwekukuvara. Mapapu anogona kuve nekusvetuka, yekumashure, nekiki kumberi kana kumashure kusimudza, nezvimwe. Chii chinoita kuti isu zvakare tive nesarudzo yekugadzira yedu yakakwana yekudzidzira maitiro. Iwe unogona kusanganisa squat uye kunze kwayo, tora lunge.
Nhanho kumusoro uye pasi
Nhanho, bhenji kana nhanho ichave iwo mabhesi eichi chiitiko chakadai. Nekuti zvinotibvumidzawo kuti tirambe tichipa makumbo edu kufamba kwakawanda, izvo zvakanyanya kuchida. Uye zvakare isu tinosanganisira mahudyu, quads kana mhuru mune chiitiko chakadai. Tinotanga kumira pamberi pedu nhanho, asi kana iwe wakasarudza bhenji kana bhokisi, haifanire kunge iri pamusoro kupfuura mabvi. Isu tinoisa tsoka imwe pairi, tichitora nhanho uye tichizvimutsidzira isu pachedu nerimwe gumbo. Chero chero hurefu hwakasarudzwa, gara uchiedza kusamisa muviri, asi kuchengetedza musana wakatwasuka, uchiita simba mumakumbo edu. Iwe unogona kusiyanisa makumbo kuti uve neyakaenzana kupedzisa.
Icho chiitiko chakazara, saka chinofanirawo kunge chiri mukudzidziswa kwedu. Iwe unogona kutanga zvese squatting uye squatting. Wobva waisa maoko ako pasi, iwe unokanda tsoka dzako kumashure, nechisviniro chidiki. Ipapo isu tichasimuka uye hongu isu tichasvetuka netsoka dzedu, kuti tidzokere kuvhu kuti titange maitiro. Kana ikaitwa nenzira isinganetsi, isu tinowana mhedzisiro yakanaka nekuti ichaitawo kuti moyo wemhanyi urambe wakawanda. Ehezve, iwe unofanirwa kugara uchigadzirisa kusimba uye kuyedza kune zvaunoda.
Exercises kutetepa makumbo uye kubvisa cellulite
Rimwe dambudziko rinotinetsa is cellulite. Chimwe chezvimhingamupinyi izvo zvisingagone kukurirwa nguva dzose, saka tinofanirwa kuita zvakawanda padivi redu. Kuwedzera kune ese ekutanga kurudziro, mamwe ma nuances anofanirwa kuwedzerwa. Semuenzaniso, muchikamu chekudya, ichokwadi icho muchero uripowo asi apa, ticha bheja zvakanyanya pamastrawberry, vise kana bhanana nekuti ivo vane antioxidants uye vanotitadzisa kuchengetedza mvura zhinji, inova imwe yemabhesi anovengwa ne cellulite.
Pakati pezviitwa zvekutetepa makumbo uye kubvisa cellulite, isu takasara neaya anoda simba shoma. Izvo zvakanakira izvi kubheja pane yakasununguka bhendi, iyo inogara ichibatsira kutaura chimwe nechimwe chikamu chinoshanda. Saka pano zvakanyatso kudikanwa. Usakanganwe zvese mapapu uye squats avo vasingambofa vasipo nekuda kwechikonzero ichi. Asi yeuka kuti mune ino kesi, iwe unogona zvakare kuzvibatsira nehuremu, kunakirwa nezvakanaka mhedzisiro. Zvakafanana nekukwira nekudzika masitepisi, kwaunogona zvakare kuisa huremu pamakumbo ako. Izvi zvinobatsira kubvisa kutsvedza uye kuratidza mamwe makumbo emhondi nekukurumidza kupfuura zvaunotarisira.
Tricks uye kurovedza muviri kuti mutete zvidya zvako
Pakati pemanyengeri anosara kutaurwa, isu takasara neizvozvo iwe unofanirwa kuwedzera yako protein yekudya. Nekuti pamusoro pekuguta uye zvinotibatsira kuwedzera mhasuru. Kana iwe uri mumwe weavo vasingakwanise kupotsa kofi mangwanani, wobva wainwa zvine mwero asi usakanganwe nezvazvo. Uye zvakare, iwe unogona kugara uchiiperekedza nemukaka wakaomeswa. Iwe unotoziva kuti icho chinwiwa chinomhanyisa metabolism saka isu tinochidawo icho muhupenyu hwedu. Munyu unodzoserwa kune rimwe divi, sezvaungafungidzira, uye zvakanakisa kuwedzera zvinonhuwira zvakaita segariki, oregano kana chero chaunoda zvakanyanya. Iwe unowana kunaka asi usingachengetedze zvinwiwa.
Kutetepa zvidya zvako unogona kubheja pane mamwe maekisesaizi senge zambuko pamafudzi. Ndokunge, iwe unofanirwa kurara nemusana makumbo ako akakotama uye zvishoma nezvishoma iwe unofema nekusimudza muviri wako asi usinga zviite mublock. Iwe uchagara uchitsigirwa nepasi petsoka uye nechikamu chemafudzi. Ichi chiitwa chinogona kusiyaniswa nekusimudza ruoko kana kuisa tsoka dzako pachigunwe. Icho chimwe chema posture ayo anowanzoitwa muPilates uye kuraira uku kuchatibatsira nemaitiro ayo uye kurovedzera matauriro iwayo. kuzadzisa chinangwa chedu.
Kusimudza gumbo ndechimwe chezvinhu zvakakosha. Takarara zvakare, takatarisana, isu tichasimudza rimwe gumbo uye tobva tadzikisa zvishoma nezvishoma tisingabate pasi apo isu tichasimudza rimwe. Kunze kwekudzidzira iyi nzvimbo, tichaitawo zvakafanana nedumbu. Saka isu tatouraya shiri mbiri nedombo rimwe! Zvishoma nezvishoma uye uchitevera ese matipi, une chokwadi chekuona mutsauko. Tiudze!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Exercise » Maekisesaizi kutetepa makumbo